Famantarana robina feno vera, robina feno Fissure. Vidiny isaky ny karaty - horonan-tsary
Ruby feno vera
Tags feno, Feno vera, Ruby
Ny famenoana ny vaky na ny poti ao anaty robina amin'ny vera firamainty na fitaovana mitovy amin'izany dia manatsara tanteraka ny mangarahara amin'ny vato, ka mahatonga ireo robina tsy mendrika sahaza teo amin'ny firavaka. Ny famaritana robina feno vera dia tsotra ary mora kokoa ny vidiny noho ny robina tsy voatsabo.
Mividiana vatosoa voajanahary ao amin'ny tranombarotra ananantsika
Voasarimakirana fitaratra feno robina
Ny vato marokoroko dia namboarina mialoha hamongorana ny loto rehetra ambonin'ny tany izay mety hisy fiantraikany amin'ny fizotrany
Diovina amin'ny fluorida hidrozenina ny vato marokoroko
Ny fizotran'ny fanafanana voalohany izay tsy ampiana mpameno. Ny fizotran'ny fanafanana dia mamono ny loto ao anaty vaky. Na dia atao amin'ny mari-pana hatramin'ny 1400 ° C (2500 ° F) aza izany dia azo inoana fa amin'ny maripana manodidina ny 900 ° C (1600 ° F) satria mbola tsy simba ny landy rutile.
Ny fizotran'ny fanamainana faharoa amin'ny lafaoro elektrika misy tsiranoka simika samihafa. Ny vahaolana sy ny fifangaroana samihafa dia hita fa mahomby, na izany aza, vovoka fitaratra misy vera no ampiasaina ankehitriny. Ny robina dia atsoboka ao anaty menaka, avy eo rakotra vovoka, atsofoka ao anaty taila ary apetraka ao anaty lafaoro izay hafanaina manodidina ny 900 ° C (1600 ° F) mandritra ny adiny iray ao anaty atmosfera mihombo. Ny vovoka miloko volomboasary dia miova aorian'ny fanamainana ho lasa mangarahara amin'ny paty miloko mavo, izay mameno ny tapaka rehetra. Aorian'ny fampangatsiahana ny lokon'ny paty dia mangarahara tanteraka ary manatsara tanteraka ny mangarahara amin'ny robina.
Raha mila ampiana loko iray, ny vovo-vera dia azo "hatsaraina" amin'ny varahina na oksida metaly hafa ary koa ireo singa toy ny sodium, calcium, potassium sns.
Ny fizotran'ny fanafanana faharoa dia azo averina intelo na inefatra, na dia miharo fifangaroana samihafa aza. Rehefa haingoina ny firavaka misy robina hanamboarana azy. Tsy tokony hosaronina asidra boracika na zavatra hafa izy io, satria io dia afaka mametaka ny etona amboniny. Tsy voatery harovana toy ny diamondra izy io.
Famantarana robina feno vera
Ny fitsaboana dia azo fantarina amin'ny alàlan'ny fanamarihana miboiboika amin'ny lavaka sy ny vaky amin'ny alàlan'ny 10 × loupe.
Ahoana no ahafantarako raha feno robina vera?
Ny toetra mampiavaka azy indrindra amin'ny robina mitambatra dia ny poizina entona anaty. Izy ireo dia mety ho faritra tokana na rahona mibontsina, velarina na boribory, ary eo amin'ny robina feno fissure feno no misy azy ireo. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, dia hita maso izy ireo na dia tsy misy fanampiana aza.
Voajanahary ve ny Ruby feno Ruby?
Eny, vato voatsabo io. Noforonina tamin'ny fampiasana hafanana sy singa iray hitondra ny loko mena midorehitra toy ny robina voajanahary, robina feno fitaratra vita amin'ny fitaratra no entina hamenoana ireo vaky izay ao anaty vato. Ireo vatosoa ireo dia mety maka tahaka ny robina tsara, saingy tsy mifanandrify amin'ny tanjaka sy ny faharetana ananan'ny tena vato.
Tsy misy dikany ve ny robina feno vera?
Ny vidin'ny robina feno vera dia mora vidy kokoa noho ny robina tsy voatsabo. Ny fahombiazan'ny fitsaboana dia mahatalanjona, satria manova ny corundum izay manjavozavo ary saika tsy misy dikany ho fitaovana izay mangarahara ampy ampiasaina amin'ny firavaka. Eny tokoa, ireo vato dia mety toa manintona ny mpividy tsy voamarina. Mety ho folo ka hatramin'ny arivo heny mora kokoa izany noho ny vato iray tsy voatsabo.
Izahay dia manao firavaka manokana miaraka amina robina feno fissure ho toy ny peratra, kavina, haba, rojo na pendant.
Tags Ruby, kintana
Tags Ruby, kintana, synthetic
Ruby ao amin'ny zoisite
Home | Vato fahaterahana | Mifandraisa aminay